प्रवास Archives - Page 207 of 218 - Kanakai Online
विप्लव समूहका जिल्ला नेता याम गिरी पक्राउ
कनकाई अनलाईन प्रहरीले प्रतिवन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहका मेचीनगर इञ्चार्जलाई पक्राउ गरेको छ । झापा जिल्ला समिति सदस्य समेत रहेका शिवसताक्षी–४, पाँचगाछीका ३७ वर्षीय यामकुमार गिरी पक्राउ परेका हुन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले गिरीलाई गएराति तिनकुनेबाट पक्राउ गरेको हो । महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुलबहादुर थापाका अनुसार विर्तामोडको…
सभामुखका लागि तयार छु, तुम्बाहाम्फे
लीलाराज झापाली प्रतिनिधिसभा उपसभामुख डा ः शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफुलाई पार्टीले सभामुखको लागि सिफारिस गरेको खण्डमा उच्च कार्यकुशलताका साथ आफुले भुमिका निभाउन तयार रहेको बताउनुभएको छ । झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार महासंघ झापाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले आफु महिला भएर भन्दापनि उत्कृष्ट कार्यकुशलता र क्षमताका आधारमा सभामुखका लागि योग्य…
कुमरखोद छोटी भन्सारको कथा आम्दामी भन्दा खर्च धेरै
लीलाराज झापाली । सामान्यतय भन्सार भन्ने वितिक्कै वढी राजस्व संकलन हुने र कर्मचारीको पनि रोजाईमा पर्ने भन्ने हुन्छ । तर झापाको कुमरखोद छोटी भन्सारमा भने यो नियम लागु नहुन पनि सक्छ । द्धन्द्ध कालमा विस्तापित भएपछि गत माघ १ गतेदेखि संचालनमा आएको यस छोटी भन्सार संचालनका हिसावले झण्डै एक वर्ष…
बाल बैज्ञानिक् सुरूङ्गामा
डिबी सिलास राई सल्यान खलंङ्गामा जनमनुभएका १५ बर्षिय बिजय रानमगर हाल कनकाई ३ निवासि बसन्त थपलियका साथमा रहेर उहाकै सहयोगमा कनकाई सेकेन्डरि स्कुलमा ९ कक्षमा अध्यायन गर्दै पाँनी जहाज हवाइजहाज अंग्रेजि र नेपालिमा बोल्ने रोवट अनि मिसाल वम समेत बनार्इसक्नुभएको छ । वसन्त थपलियका अनुसार बाल बैज्ञानिक रानले बिगत २०७६…
झापा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य स्यायम सेविकालाई साईकल
कनकाई अनलाईन १६ औ राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका दिवशको अवशर पारी झापा गाउँपालिकाका ३! महिला स्वास्थ्य स्वयंम सेविकालाई गाउँपालिकाले साइकल प्रदान गरेको छ . न्य’न सेवाका विच गाउँघरमा सेवा गरिरहेका महिला स्वायंमसेविकालाई गाउँपालिकाले सेवामा सहयोग प’गोस भनेर साइकल वितरण गरेको झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहले बताउनुभयो . साईकल प्राप्त…
प्रथम बाह्रदशी नकआउट भलिबल प्रतियोगिता आजबाट
कनकाई अनलाईन प्रथम बाह्रदशी स्थानीय तह स्तरीय नकआउट पुरुष भलिबल प्रतियोगिता बुधवारदेखि झापाको बाह्रदशीमा संचालन भएको छ । चारदिन सम्म संचालन हुने प्रतियोगितामा झापाका १४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले सहभागिता जनाउँने भएका छन् । खेल संचालक समितिका अध्यक्ष रामदर्शन तामाङको सभापतित्व रहेको प्रतियोगिताको उद्घाटन बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजवंशीले गरेका…
हल्दिवारीको जागृति क्याम्पसमा प्रगतिशिलको प्यानलै विजयी
कनकाई अनलाईन बिर्तामोड । झापाको हल्दिवारी–१ गोल्धापमा रहेको जागृति क्याम्पसमा प्रगतिशिल समुहको प्यानल नै विजयी भएको छ । निर्वाचनका लागि नेकपाले संघीय समाजवादी र जनमुक्ति पार्टीसँग समन्वय गरेर प्रगतिशिल समुह बनाएको थियो भने कांग्रेसले राप्रपासँग मिलेर प्रजातान्त्रिक समुह बनाएर चुनाव लडेका थिए । क्याम्पसको सञ्चालक समितिमा प्रगतिशिल समुहबाट उम्मेदवार भएका…
नेकपाको पाचौ जित
कनकाई अनलाईन सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती ८ मा नेकपाका उम्मेदवार केदारनाथ आचार्य विजयी हुनुभएको छ । उहाले ७ सय १२ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसक असोक तामाङले ४ सय ३९ मतमा चित्त बुझाउनुभयो ।
नेकपाको लगातार चौथो जित सुन्दरबजारमा श्रेष्ठ बिजयी
कनकाई अनलाईन लम्जुङको सुन्दरबजार नगरपालिका २ मा मतगणना सकिएको छ । सो वडामा नेकपाका नविन कुमार श्रेष्ठ बिजयी भएका छन । उनले ९९३ मत ल्याए भने नेपाली काँग्रेसका प्रकाश सँढाई ४८२ मत ल्याए । कुल ११ मत बदर भएको थियो । यसअघि कुमाख गाउँपालिका वडा नम्वर ५ को वडा अध्यक्षमा…
सबैतिर नेकपा उम्मेद्धार बिजयी भएपछि कांग्रेसले लगायो धाधलीको आरोप
कनकाई अनलाईन काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन परिणाम नआउँदै उपनिर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएको छ । शनिबार साँझ काँग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गरि वर्तमान सरकारको उपनिर्वाचन समेत धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नसकेको बताए । ‘निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भय र धाँधली रहित वातावरणमा…